Shaqooyinka - Delta Injineer Belgium
Delta Injineerku waa shirkad soo kordhaysa oo noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee iibiya xalalka mashiinka wax u dhima ee warshadda dharbaaxada.
Waxaan nahay shirkad hal-abuur leh oo ku dhiirrigelisa shaqaalaha inay la yimaadaan fikrado horay u socda, fikradaha ka baxsan sanduuqa,…. Hoggaamiyeyaasheennu waxay ku dhiirrigeliyaan shaqaalaha inay bartaan oo ay ku koraan inta ay ku jiraan dhammaan shaqadooda Delta Engineering.
Iyada oo loo marayo dhaqankeena, wadiskeena iyo khibradeena shaqaale kasta oo shaqsi ah, waxaan si gaar ah ugu leenahay boos aan kula daboolno dalabaadka macaamiisheena adduunka.
Farsamada Codsiga Delta
Automatikada injineerinka ee Delta
Merisor - ROMANIYA
GA, Norcross - MAREYKANKA
Fadlan hoos ka fiiri liiska shaqooyinka banaan ee aan joogno.
Injineerka Naqshadda Korantada
Injineerka Adeegga Goobta
Engineer Mashiinka Naqshadeynta
Injineerka Iibka (iskood u shaqeysta)
Injineerka Mashruuca Iibka
Injineerka Sare ee Automatiga ah
Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah shaqooyinka kor lagu soo sheegay, fadlan u soo dir CV-gaaga [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah shaqooyinka kor lagu soo sheegay, fadlan u soo dir CV-gaaga [emailka waa la ilaaliyay]
Injineer nashqadeeyaha farsamada
Barnaamijka Barnaamijyada ee loo yaqaan 'PLC-Robot programmer'
Injineerka Nidaamka Himilada
Taageerada Xisaabaadka & HR
Xilligan Delta Engineering Inc ma laha boosas banaan oo muuqda.
Salaan * Mr.Marwo.
CV / lifaaq *
Fadlan gali laba lambar * Tusaale: 12
Sanduuqan waxaa loogu talagalay ilaalinta spam - fadlan ka tag: